Ball ahama, Ball Madax, Madax Qaliinka - Shineway
Alaabtayada ugu muhiimsan
Wax soo saarkayagu waxay leeyihiin 3 taariko waaweyn, dhinacyo, filtarka kubbadda, iyo shubay. Kubadahayagu waa kubbado godan iyo kubbado adag. Waalka kubada inta badan waa ahama flange kubada waalka. Shubay waa habka loo shubay silica Sol a.
Waxaan leenahay in ka badan 20 sano oo khibrad wax soo saar ah. Kubadahayagu waxaa ka mid ah kubbadaha sabbaynaya, kubbado go'an, kubbado godan iyo kubbado adag. Qalabka waa A105, F304, F316, F304L, F316L, ALLOY STEE iyo waxyaabo kale
Qalabkeena kubbadda ayaa adeegsada tuubbadayada iyo kubbadaha si ay si adag u xakameeyaan tayada wax soo saarka. Farsamooyinkayaga kubbadda cagta ayaa inta badan ah qalab fallaadh ah oo flanged ah. Cadaadisku waa 150LB, 300LB, 600LB, JIS 5K, JIS 10 iyo wixii la mid ah.
Daarashadeenu waxay ka samaysan yihiin geedi socodka shubay silica oo leh muuqaal aad u fiican. Alaabtu si fiican ayey u iibiyaan gudaha iyo dibaddaba, waxaana lagu soo saari karaa iyada oo loo eegayo sawirrada macaamiisha.
Shirkaddayadu waxay leedahay wax ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo ah mashiinnada, waxayna u habeyn kartaa alaabooyinka iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Zhejiang Shineway Industry Limited. waxaa la aasaasay sanadkii 2000. Shirkadu waxay hada ku taalaa Longwan Binhai Park (agagaarka garoonka diyaaradaha), oo ku raaxeysata sumcadda “China Valve City”, oo wadarta guud ay tahay 15,000 mitir murabac. Shirkaddayadu waxay leedahay saddex wershadood oo u gaar ah: warshad kubbadda, macdanta, warshadda gaashaanka. Shirkaddu hadda waxay leedahay aqoon isweydaarsi dhexdhexaad ah oo dhalaalaya foornada, aqoon isweydaarsi ku saabsan farsamooyinka wareegga, aqoon isweydaarsiga wax soo saarka, iyo sheybaarka sheybaarka. Shirkaddayadu waxay ku shaqeysaa mabda'a ah "daacadnimada ku saleysan, macaamiisha ugu horreysa". Tayo sare, qiimo jaban, adeeg kaamil ah iibka kadib.
Wixii weydiin ku saabsan wax soo saarka ama pricelist, fadlan naga daa oo waxaan la xiriiri doonaa 24hours gudahood.
Shirkaddu waxay siisaa dadka isticmaala alaab tayo sare leh oo tayo leh. Waxyaabaha ugu waaweyn ee shirkaddu soo saarto ayaa kala ah dhinacyo, jilayaal, filtarka kubbadda cagta iyo wixii la mid ah.
Ball Madax Trunnion
Kubad saddex geesood ah
Dusha sare ee dahaadhka kubbadda birta ah ee birta ah waxay leedahay waab albaab isku mid ah, oo dusha sare ee jirridda waalka waa la peroxidized, sidaa darteed waxay leedahay caabbinta daxalka u fiican oo sidoo kale waa mid yara adkeysata Gawaarida albaabka birta ah ee birta ah ayaa dooran kara tuubooyin kala duwan, si loo qanciyo baahida loo qabo ...
Kubbadda adag ee qufulku waa furitaanka iyo xidhitaanka taxanaha kubbadda ee kubbaddaha kubbadda cagta ee GM, oo ku qalabeysan heerkul kala duwan oo sarreeya, cadaadis sarreeya iyo qalab kubbadda u adkaysta -Cr-W C iyo W daawaha dusha sare ayaa leh adkaanta ugu hooseysa waana mid ka mid ah kuwa ugu fiican. Waxay u adkeysaneysaa qabowga iyo kuleylka kuleylka, ...
Si loo hubiyo waxqabadka daboolida birta birta ee birta ah ee birta ah marka dhexdhexaadka hawlgalka hooseeyo, cadaadis cayiman oo horay loo adkeeyo ah waa in laga sameeyaa inta u dhexeysa kubbadda iyo kursiga wax lagu xiro. Kursiga adag ee wax lagu xiro, isku halaynta iyo nolosha adeegga kubbadda birta ahama v ...